News Collection: मदिरा सेवनपछि प्रचण्डका कुरै बेग्लै
मदिरा सेवनपछि प्रचण्डका कुरै बेग्लै
काठमाडौ, बैशाख १३ । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि बालुवाटारमा प्रायः मदिरामस्ती चलिरहने गरेको छ। त्यस्तै नयाँ वर्षको उपलक्ष्य भन्दै गत साता बालुवाटारमा कक्टेल पार्टीको आयोजना गरिएको थियो। पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा उनीहरूनिकट नेता तथा केही बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता थियो। मदिराले लठ्ठिएका प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व सरकारमा रहँदा
पनि केही गरेन भन्नेहरू प्रसस्तै रहेका र उनीहरूले नै पार्टी नेताहरूको आलोचना गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै पार्टीले निकै ठूलो प्रगति गरेको दाबी गरेका थिए। प्रचण्डको भनाइ थियो– साथीहरूले भनेकोजस्तो स्थिति छैन, माओवादीको क्रान्तिले निकै ठूलो परिवर्तन गरेको छ। तपाईंले अरू केही नदेखे पनि पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, यो नै माओवादीका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रगति हो। यदि माओवादीले साँच्चिकै प्रगति नगरेको भए बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्थ्यो? अनि तपार्इंहरू बालुवाटारमा बसेर यसरी रक्सी खान सक्नुहुन्थ्यो?
प्रचण्डले अरूको विकास हुन नसके पनि माओवादी नेताहरूको राम्रो प्रगति भएको तर्क गरेका थिए। उनको भनाइ थियो– पार्टीमा कुनै एकजनाले मात्र होइन सबै नेताहरूले राम्रै मोज गरेका छन्, यो नै विकास र प्रगति हो। मुलुकमा सबैले जनताकै नाम भजाएर आफ्नो मोज गरिरहेको पनि प्रचण्डको भनाइ थियो। कक्टेल भोजमा सहभागी प्रधानमन्त्री भट्टराईका एक स्वकीय सहसचिवले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, 'अरूले वषर्ौंसम्म यही नेपाली जनताको नाममा मोज गरे, तर हामीले जनतालाई पनि मोज गर्न छुट दिएका छौँ।' आफ्ना पार्टी नेताहरूको इच्छा पूरा गर्न आफूले कुनै कसर बाँकी नराखेको पनि प्रचण्डको भनाइ थियो। उनले भने, 'अरू केही नभए पनि यी यसरी रमाइलो त गर्नुभएको छ नि होइन।' प्रचण्डले माओवादी क्रान्तिले सबैतिर चेतनाको लहर ल्याएको उल्लेख गर्दै कहिलेकाहीँ त्यसैले आफूलाई अप्ठ्यारो पारेको पनि बताएका थिए। पार्टीमा सहभागी नेता देवेन्द्र पौडेलले भने, सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्दा समस्या देखिएको र यसलाई माओवादीले नै समाधान गर्न सक्ने बताएका थिए।